Jwell Twin visy fanamainana tsy misy fanamainam-bolo vita amin'ny PET Sheet Extrusion - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Jwell Twin visy tsy misy fanamainana Vine PET Sheet Extrusion
Fotoana: 2019-04-29 Hits:
Jwell dia nanamboatra ny tsipika fanodinana kambana roa kambana ho an'ny ravin'ny PET, ity tsipika ity dia misy rafitra degassing, ary tsy ilaina ny fanamainana sy ny crystallizing unit. mampihena ny fahaverezan'ny viscosity an'ny resin PET, ny roller symmetrika ary ny rindrin'ny kalender manify dia manamafy ny fihenan'ny fihenam-bidy ary manatsara ny kalitaon'ny kalitao sy ny taratasy. be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fonosana thermoforming.
APET, PETG, CPET tokana-sosona na tsipika extrusion multi-layer
Ity dia iray amin'ireo laharam-pamokarana mandroso indrindra miaraka amin'ny haitao matotra sy ny fitoniana any Shina. Raha ampitahaina amin'ny fitaovana hafa mitovy amin'izany dia mihoatra ny 30% ny fahombiazany amin'ny ankapobeny. Ity tsipika ity dia mety amin'ny PS, PP, PE ihany koa.
Ny PETG dia antsoina hoe PET mari-pana ambany, fitaovana fanamboarana tontolo iainana vaovao misy fiasa toy ny hazavana avo, mangarahara tsara, fananana sakana tena tsara, fametahana tena, izay ampiasaina amin'ny fametahana lakaoly sy fanodinana matetika.
CPET dia karazana PET novaina, miaraka amin'ny fanoherana tsara ny mari-pana avo lenta, mazàna ampiasaina amin'ny fonosana amin'ny lafaoro mikraoba.
Taratasy fitaratra optika stereoscopic PET
Izy io dia azo ampiasaina ho fonosana avo lenta ho an'ny kosmetika, fanafody, paraky sy alikaola ary ny entana mahazatra toy ny stationery, dokam-barotra, afisy ary kara-panaraka rehetra.
PLA dia karazana polyesterers endrika Aliphatic. PLA dia azo ampiasaina amina fonosana voankazo, legioma, atody, sakafo masaka ary sakafo natsatsika, ary azo ampiasaina amin'ny fonosana sandwich, biscuit ary fonosana hafa toy ny voninkazo vaovao.
JWELL PET mifanitsy kambana extrusion tsipika
Website:Masinina fitrandrahana plastika, milina famolavolana plastika, milina fanamafisana plastika, milina fanodinana plastika-CHINA JWELL Machines Co., Ltd.
HIVERINAFitaovana - JWZ-BM30F / 160F / 230F Milina mitsivalana mitsoka lovia
NEXTManampy amin'ny fananganana toeram-piompiana an-dranomasina maitso ny Jwell Machinary!